Eshibhile CNC turning izingxenye ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc. Kuyinto enhle yokukhiqiza izingxenye zomshini ze-CNC (kufaka phakathi izingxenye zokujika ze-CNC).
I-Brass CNC ijika izingxenye zokuguqula ukucubungula ukucacisa
I-Brass CNC turning isetshenziselwa ukuguqula indawo yokusebenza ejikelezayo ngethuluzi lokujika. Ama-drill, ama-reamers, ama-reamers, ompompi, amathuluzi we-die and knurling nawo angasetshenziswa ku-lathe ukucubungula okuhambisanayo. Ama-lathes asetshenziselwa ikakhulukazi imishini yemishini, ama-disc, imikhono neminye imisebenzi yokusebenza enezindawo ezijikelezayo. Ziyihlobo elisetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwamathuluzi emishini emafemini okukhiqiza nokulungisa amafektri.
Izinzuzo ze-Shanghai Ouzhan Brass Turned Parts
- Kuhlala isikhathi eside.
- Ukumelana nokuqina okuqinile.
- ductility Okuhle.
- Ukuvumelana nezimo nokulwa nokugqwala, ukubekezelelana okuncane, ukucacisa okuphezulu.
- Amandla aqine kakhulu, anti-rust.
- Ukunemba kwemishini kokuphenduka okuhle kungafinyelela ku-IT8, IT6, futhi ubukhulu bendawo Ra bungafinyelela ku-1.6 ～ 0.8μm.
OEM ngokwezifiso zethusi turning inkonzo-China Shanghai Ouzhan CNC zethusi turning izingxenye umkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukucacisa okuphezulu kwe-CNC ukuvula izingxenye zethusi ngekhwalithi ezinzile nethembekile kungacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wethusi. Ngaphezu kwalokho, i-CNC yokuguqula imikhiqizo yethusi inikezwe ngokuqinile ukuhambisana namazinga wekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singanikeza ngezinsizakalo zamanani entengo yokuncintisana ngemikhiqizo yethusi yethusi ye-CNC kumakhasimende ethu abalulekile.
Isicelo zethusi turning izingxenye
Ama-lathes asetshenziselwa ikakhulukazi imishini yemishini, ama-disc, imikhono neminye imisebenzi yokusebenza enezindawo ezijikelezayo. Ziyihlobo elisetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwamathuluzi emishini emafemini okukhiqiza nokulungisa amafektri.
Izinzuzo ze-Ouzhan Brass Turning Service
- Yonke imininingwane ye-CNC ephendukile yethusi ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza izingxenye zethusi ezinemba ngokunemba.
- Emkhakheni wezinsimbi zethusi, inzuzo yethu enkulu ukukhiqizwa kokufakwa kwethusi, ama-valve webhola, njll., Futhi sinokubambisana okuseduze nezinkampani ezinkulu eYurophu, eSouth Korea, Thailand, njll.
Langaphambilini Izingxenye zepulasitiki ze-CNC
Olandelayo: Ithusi elenziwe ngokwezifiso eliphendulela izingxenye zemishini yezesekeli